Bogga ugu weyn » Warshadaha Maraakiibta » Princess Cruises waxay sii wadaa qorshayaasha ay dib ugu bilaabi doonto markab dalxiis ee dalka Mareykanka
Princess Cruises waxay sii wadaa qorshayaasha ay dib ugu bilaabi doonto markab dalxiis ee dalka Mareykanka
Laga bilaabo inta udhaxeysa Sebtember 25 iyo Nofeembar 28, 2021, doonyaha dul saaran sideed markab Princess MedallionClass ayaa mar kale martida u qaadi doona Caribbean, Panama Canal, Mexico, Hawaii, iyo California Coast.
Princess ayaa ku dhawaaqday ujeedkeeda inay ku soo laabato shaqada Mareykanka.
Princess Cruises oo qorsheyneysa inay ka shiraacato Los Angeles, San Francisco, iyo Ft. Lauderdale dayrta.
Maraakiibta dalxiisyada Princess ee maraya illaa 2021 ayaa loo heli karaa martida heshay tallaalkeedii ugu dambeeyay ee tallaalka la ansixiyay ee COVID-19.
Ka dib wadashaqeyn lala yeesho saraakiisha dowladda, iyo hagitaan ka soo baxa Xarumaha Mareykanka ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC), Gacan-goyska Princess waxay ku dhawaaqeysaa ujeedkeedu inuu ku soo laabto adeegga Mareykanka isagoo ka shiraacanaya Los Angeles, San Francisco, iyo Ft. Lauderdale dayrta.
Princess Princess iyo Grand Princess: Los Angeles waxay mar labaad siisaa guga meelo kala duwan, oo ay ku jiraan Xeebaha Kalifoorniya iyo Mexico oo safarro toddobo maalmood ah ah, iyo Jasiiradaha Hawaii oo ah 15 maalmood oo dalxiisyo ah. Sidoo kale waxaa la heli karaa saddex ilaa shan maalmood oo safar Getaway ah oo lagu aadayo Xeebta California iyo Mexico.
Ruby Princess: Markay ka dhoofayso Port-ka caanka ah ee San Francisco, Ruby Princess waxay ku bilaabi doontaa toddobo maalmood oo xeebta Kaliforniya ka hor intaan lagu darin 15 maalmood oo dalxiis ah iyada oo sahaminaysa afar jasiiradood oo jasiirado kala duwan ku yaal Hawaii iyo 10-maalin oo Mexico ah oo loo raacayo safka.
Amiirad Sixiroole ah: Waxay kubilaabaneysaa laba markab oo cusub oo cusub oo ka socda Ft. Lauderdale si ay u bilawdo xilligeedii furitaanka ee 10-maalmood dalxiis ee Koonfurta iyo Bariga Kariibiyaanka.
Princess Princess, Princess Regal iyo Princess Caribbean: Laga soo bilaabo Ft. Lauderdale, martidu waxay jasiirad ku mari karaan Kariibiyaanka iyagoo wata saddex, shan, toddobo iyo 14 maalmood oo dalxiis ah oo laga heli karo Bariga Caribbean-ka oo booqda qaar ka mid ah xeebaha ugu caansan adduunka iyo Western Caribbean-ka oo u oggolaanaya martida inay soo sahamiyaan qadiimiga ah Burburka Mayan iyo quruxda dhuxul dhagax ah iyo godad biyo hoostooda ah.
Princess Princess: Waxay u safreysaa Kanaalka Panama, laga bilaabo Ft. Lauderdale taxane ah 10-maalin oo dalxiis ah oo loogu talagalay cajaa'ibkan dalxiiska adduunka.
"Markii aan sii wadno ku soo noqoshadayadii adeegga, waa farxad noo ah inaan awoodno inaan fursado dalxiis oo dheeri ah u soo qaadno martideena safarka gaajaysan," ayuu yiri Jan Swartz, madaxweynaha Princess Cruises. "Waxaan ka mahadcelineynaa taageerada dowladda iyo mas'uuliyiinta dekedda oo aan si dhow ula shaqeynay si fursadaha safarkaas looga dhigo kuwo la heli karo, si feker leh oo nabadgelyo leh martidayada."
Cunnada, madadaalada, iyo faahfaahinta dalxiisyada xeebta hadda waa la dhammeystirayaa waxaana la soo wargelin doonaa toddobaadyada soo socda.
Maraakiibta dalxiisyada Princess ee maraya illaa 2021 ayaa loo heli karaa martida la siiyay qaddarkoodii ugu dambeeyay ee tallaalka la ansixiyay ee COVID-19 ugu yaraan 14 maalmood ka hor bilowga markabka oo ay hayaan caddeyn tallaal. Tallaalada shaqaalaha ayaa la waafajin doonaa tilmaamaha CDC.
Waxaan sii wadi doonnaa inaan kormeerno hagitaankii ugu dambeeyay ee ka yimid CDC iyo sidoo kale saraakiisha maxalliga ah, gobolka iyo federaalka ee dekedaha aan ka dhoofno iyo kuwa aan booqannaba waxaanan ku hagaajin doonnaa borotokoolka guddiga iyo shuruudaha tallaalka, haddii loo baahdo. Haddii tallaalkayagu isbeddelo, waxaan ogeysiin doonnaa martida ka hor bixinta ugu dambeysa.